निर्मला पन्त प्रकरण भएको ठाउँबाट लामो समयपछि आयो अचम्मको खबर ! अपराध आइतबारका दिन ? - Hamro Abhiyan
निर्मला पन्त प्रकरण भएको ठाउँबाट लामो समयपछि आयो अचम्मको खबर ! अपराध आइतबारका दिन ?
गत वर्ष साउनमा भएको १३ वर्षीया निर्मला पन्त ह त्या प्रकरणले चर्चा सर्वत्र पाए पनि कञ्चनपुर सुरक्षाका दृष्टिकोणले शान्तिपूर्ण जिल्लाका रुपमा चिनिन्छ ।
निर्मला प्रकरणले कञ्चनपुर अपराध बढी हुने जिल्लाको रुपमा बढी प्रचारबाजी गरिए पनि र भारतसित खुला सीमा जोडिए पनि यहाँ ठूला आ पराधिक घटना भने भएका छैनन् । निर्मला प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०देखि विभिन्न टोली सक्रियरुपमा परिचालन भएका छन् ।
पछिल्लो समय बस्ती र टोल÷टोलमा प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम लिएर जिल्लाभर खटिएको प्रहरी नागरिकसितको समन्वयमा आधारभूत सुरक्षा, ला गुऔ षध नियन्त्रणदेखि ट्राफिक नियमबारे सचेतना फैलाउन अग्रसर छ ।गत आर्थिक वर्षको अ पराधको तथ्याङ्क हेर्दा जिल्लामा बढी अ पराध ‘आइतबार’का दिन भएको देखिएको छ । गत आवभर आइतबार मात्रै १२२ आ पराधिक घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । बारकै आधारमा सोमबार १०४ अ पराध यहाँ भएको देखिन्छ । त्यस्तै शुक्रबार ९२, बुधबार ८८, मङ्गलबार ८४, बिहीबार ७३ र शनिबार ५७ अ पराध गत आवमा भएको प्रहरी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी समयलाई आधार मान्दा कञ्चनपुरमा दिउँसो १२ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेको बीचमा बढी त्यस्ता घ टना गत वर्ष भएका थिए । उक्त कार्यालयले अ पराधमा १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका मानिस बढी सम्लग्न भएको देखिएको जानकारी दियो ।गत वर्ष ६३४ मुद्दा दर्ता भएकामा सो समूहका व्यक्ति ३१४ अ पराधमा संलग्न रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले बताउनुभयो ।
“एकाध घटना चर्चामा आए पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले यो शान्त जिल्ला नै हो ।” उहाँले भन्नुभयो, “समाजको सुरक्षा र अ पराध नियन्त्रणका लागि हाम्रो सक्रियाता दिनहूँ बढिरहेकै छ ।” प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्दले प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम जिल्लाभरि सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।“टोल र विद्यालयस्तरसम्म समिति गठन भएर बस्तीसम्म पुग्दैछौँ ।” उहाँले भन्नुभयो, “समाजको सुरक्षाका निम्ति सबैले प्रहरीसित समन्वय र सहकार्यका निम्ति तयार हुनुपर्छ ।” गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी आ त्मह त्याबाट युवायुवतीले ज्या न गुमाएका थिए ।
“यहाँ १४५ जनाले गत वर्ष आ त्मह त्या गरे ।” उहाँले भन्नुभयो, “आ त्मह त्या गर्ने १६ देखि २५ बर्ष उमेर समूहका युवायुवती बढी थिए ।” गत वर्ष ज बर्ज स्ती करणीका ३४ र ज बर्जस्ती क रणी उद्योगमा २२ वटा मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका थिए ।तीमध्ये तीनबाहेक अरु मुद्दाका अभियुक्तलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको थियो । त्यस्तै ला गुऔ षधका ४२, क र्तव्य ज्या नका छ र ज्या नमा र्ने उद्योगका २२ मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । भmण्डै पाँचलाख जनसङ्ख्या रहेको यस जिल्लामा प्रहरीले आफ्नो उपस्थिति पनि बढाउँदै लगेको जनाएको छ ।